ဆယ်လူလာအော်ပရေတာမှာ (မိုဘိုင်း) ဆက်သွယ်ရေးကုဒ် 982 မှာစတင်သည်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
982 ကုဒ် Perm နှင့် Kurgan ဒေသနှင့် Chelyabinsk ဧရိယာထဲမှာဥပမာ, MTS သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းတီဗီစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ငါလည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိသမျှတို့, ကျေနပ်မှုအရာအားလုံးကိုကျေနပ်သည်အထိဒီအော်ပရေတာများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို (ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေး, ဒါပေမယ့်လည်းအင်တာနက်ကိုမရင့်) ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒီ code တည်ဆဲ 1991 နှစ်ပေါင်းအတူရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသူအပေါင်းတို့ပိုင်နက်အပေါ်တစ်ဦးဆယ်လူလာအော်ပရေတာမိုဘိုင်း Tele စနစ်များ (MTS) ကိုအသုံးပြုသည်လက်ရှိတွင်ရုရှားဆယ်လူလာအော်ပရေတာအကြားတစ်ဦးဦးဆောင်အနေအထားရရှိထားသူ!
မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ MTS အသုံးပြုသော Code ကို 982 မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်များကိုရုရှားအလယ်ပိုင်းဒေသ (မိုဘိုင်း TeleSystems) အများအပြားဒေသများ:
Kirov, Kurgan, Perm ဒေသကြီး, အ Komi-သမ္မတနိုင်ငံ, Sverdlovsk, Tyumen, Udmurtia သမ္မတနိုင်ငံ, Chelyabinsk ။
ဥပမာအားဖြင့်, ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည် code ကိုအတူကိုက်ညီသည့်ဒေသရှင်းလင်း, ဒီမှာ သို့မဟုတ်အော်ပရေတာ subscription ကိုဝန်ဆောင်မှု။
ဒီ code MTS ၏ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေး၏အော်ပရေတာသက်ဆိုင်သည်။ ထိုသို့အများအပြားဒေသများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤဒေသများနှင့်ဒေသများ: လျှော့ Perm, Kirov ဒေသ, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast နှင့်အဘိဓါန် Komi သမ္မတနိုင်ငံရည်ညွှန်းသည့် Udmurtia သမ္မတနိုင်ငံ, Chelyabinsk ဒေသ, Yamalo-Nenets အဘိဓါန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Okrug, Tyumen ဒေသသည် Khanty-Mansi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေ, Udmurtia သမ္မတနိုင်ငံ, အ Khanty-Mansi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေ။ ဒီကုဒ်အများစုမှာ -Khanty အဘိဓါန်-Mansiysk နှင့် Chelyabinsk အတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်တို့မူကားအထူးဒေသဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုရှာဖွေချင်လျှင်, ဤစာမျက်နှာတွင် သင့်အနေဖြင့်ကုဒ်ပြီးနောက်နံပါတ်များဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လည်းဒီ site ပေါ်တွင်နိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများ၏တယ်လီဖုန်း codes တွေကိုကျော်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များအများကြီးရှိသည်။
MTS ဒီ code အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ, Chelyabinsk ဒေသ, Tyumen ဒေသ, Perm အစွန်း Kirov ဒေသ Kurgan ဒေသသို့မဟုတ် Komi ၏ Sverdlovsk ဒေသ။ အချို့ရှိအခြားဒေသများဖြစ်ပေမယ့်အခြေခံဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်။
Posted in, ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,271 စက္ကန့်ကျော် Generate ။